Gospel Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil Injiil
wacdinnaa Masiix, Tus ka Nasahanyahay
video Tani iyo qoraallada waa ka Trip ee General Session ee Shirka Legacy 2013.
theme ee shirkan waa Soli Deo Gloria, ama aad keligaa Ilaah ammaanaya. Taasi theme weyn. Oo waxaan rabnaa aragti in - in sharafta in Caalamka oo dhan waxaa iska leh Ilaah oo keliya,, inay ku wargeliyaan wax kasta oo hal aannu ku samayn lahayn. Inta lagu guda jiro waqtiga aan caawa, Waxaan doonayaa in aad ka fikirto sida in wargelinaysaa our wacdinta.
Sheegista dadka wax Ciise ku saabsan u muuqataa in ay noqon mid ka mid ah kuwa wax oo dhan oo naga mid ah la ogaado waxaan u baahan nahay in la sameeyo, weli oo dhan oo naga mid ah danbi ka dareemin ma ku filan samaynaya. Waxaan xaq u ahay? Laakiinse keligay baan gooni anigaa ku jira in? Xitaa kaliya isbuucaan ee la soo dhaafay, Waxaan dareemayey xukumay sababtoo ah xiriir Waxaan bilaabay inuu wax dhiso iyadoo mid ka mid ah deriskayga ayaa noocee ah ay bilaabeen in ay iska dhici. Anigu ma aan ahayn sidii ula kac ah sida waa in Waxaan ku saabsan dhismaha on xiriirka in, iyo sii wadaan inay isku dayaan in ay isaga u sheegi ku saabsan Ciise. Oo waxay u egtahay waxaan dareemayaa sidan inta badan. Su'aasha aan doonayo in aan ka codsan waa sababta? aragtida Maxaa wadnaha loo baahan yahay in la hagaajiyo? Waxaan u baahanahay inaan maankayga in la cusboonaysiin. Anigu waxaan leeyahay in la xasuusto sababta aan u ahay…
Waxaan lahaa songs jecel sida "Money ma waa wax,"Oo waxaan maqlay albums la horyaal sida" Hel Rich ama dhinta Isku dayga. "Sidaas waxa run ahaantii ma aha wax lala yaabo in aan fikrad nolosha wanaagsan ahaa isagoo jeebka ah si cufan in ay ma uu doonaynin xataa dhow. Waxa aan ahaa oo dhan ee ku saabsan lacagta, in kastoo. Waxaan bartay oo ku saabsan hedonism, galmo caadi ah, Maadiga, irresponsibility, caajisnimada, daroogada, iyo helitaanka ixtiraam - oo dhan sida xabbadood in xujo ku ah…